अस्पतालमा छटपटाई रहेकि श्रीमतिका ज्यान बचाउने आशा सहित विदेशी भूमिबाट श्रीमानकाे यस्तो स्टाटस! – PathivaraOnline
Home > प्रवास > अस्पतालमा छटपटाई रहेकि श्रीमतिका ज्यान बचाउने आशा सहित विदेशी भूमिबाट श्रीमानकाे यस्तो स्टाटस!
अस्पतालमा छटपटाई रहेकि श्रीमतिका ज्यान बचाउने आशा सहित विदेशी भूमिबाट श्रीमानकाे यस्तो स्टाटस!
admin October 23, 2020 October 23, 2020 प्रवास	0
अब म मेरो आफन्त साथिभाई सबैमा आशा गर्छु । अनि सबैले एक एक सेयरपनि गर्दिनु होला प्लिज । दुःख पीडा सबैलाई आईपर्छ मात्र ढिलो छिटोमा फरक हुन्छ । मैले पनि धेरैलाई सहयोग गर्दै आए आज मलाई नै यस्तो पीडा पर्यो । क्रिपया हामीलाई बचाउनुहोस् । जनबोलीबाट साभार
नवरात्रको सातौँ दिन : कसरी गर्ने कालरात्रि देवीको पूजा ? यस्तो छ परम्परा!
विदेशमा रहेका ८० लाख नेपालीबारे के सोच्दैछ नेपाल सरकार? पीआर र ग्रीनकार्डवाला के गर्लान? हेर्नुस्
मलेसियाको सडकमा अलपत्र एक नेपाली युवाको यस्तो दुःखद अन्त्य!